Ubungqina: Indlela I wasinda | Apg29
Ngenye imini ndaqonda ukuba bukaYehova buthe ngokwenene yaye owazuza Calvary.
UYehova wayesazi ukuba Yena uya kundithabatha. Yena Makhe ukufunda nokuqonda umda yenzululwazi. Ngenye imini ndaqonda ukuba bukaYehova buthe ngokwenene yaye owazuza Calvary.
Umakhulu wandinika ukholo ubuntwana, kodwa zange saya ecaweni. Uqinisekiso kuyamangalisa, kodwa akazange tye. Ndafunda yenkolo ethile, kodwa virrade.
Inyaniso eyangena isidenge yam, ndaza ndabhaptizwa. AmaKristu mzi waba luncedo olukhulu. Nalen kunye ezincinane kwaba litshatshazi.
Oku kwakhokelela indlu, ukuba ingabi xa vein isabhokhwe ngasekhohlo, kodwa kwizalamane ezininzi basindiswayo. Ungakhathazeki novuyo. Imvuselelo iza intlungu kunye novuyo, njengokuba umfundisi bakwaMoya wathi njengoko wayelele lokufa.
INkosi ayiyi kuthabatha nathi ngendlela efanayo, kuba bezakubaneemfuno ezahlukileyo. UChris uyacula iingoma ezindala amahle uthethe entliziyweni. Abanye abashumayeli bathetha iLizwi oyinyaniso likaThixo. Ezinye pager ukufunda iBhayibhile ngokuzimisela. Ezinye, njengam, kufuneka yanele kwi eninzi intetho zenzululwazi.
Nkosi ukuqalela ezantsi xa isebenza. My nobuntwana abanye 'waba iyoyikeka kunye ukubethwa nonxunguphalo. A intsikelelo ngendlela engaqondakaliyo. UYehova wamva ekhala apho waphoswa Ismail phantsi kwetyholo.
Asingabo bonke abantwana izizukulwana ezininzi yamaKristu, kodwa kwakukho amaKristu athembekileyo kwintsapho yam 1800. Seven befundisi laseBhaptizi waya eUnited States omnye wafa wevangeli the Congo.
Yayithabatha ixesha omtsha phezu. Ke wangenelela iNkosi ukuba siza kufika kanye.
Obu ke bubungqina nomfundi email. imibono wam ungumbhali.